Warshad ay Itoobiyaan gubeen oo shaqadii dib u billawday - BBC News Somali
Warshad ay Itoobiyaan gubeen oo shaqadii dib u billawday
Waxaa maanta si buuxda shaqadii dib ugu billawday warshad fiilooyinka samaysa oo Turkiga laga leeyahay taas oo magaceeda loo soo gaabiyo BMET. warshadan waxaa bishii hore gubay dad ku mudaaharaadayay gobolka Oromada ee dalka Itoobiya.
Gobolkaasi waxaa ku dhuftay mudaaharaadyo aan la sii saadaalinin oo lagaga soo horjeeday xukuumadda.
Warshaddu waxay sheegtay in ilaa iyo hadda ay soo gaareen khasaare gaadhaya 6 milyan oo doolar, kuwaas oo isugu jira dhibaato loo gaystay iyo khasaare noocyo kale ah ayna wali sii wadaan baaritaanada lagu darsayo khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray.
Bishii tobnaad ee sanadkan waxaa la weeraray shirkado kale oo ajaaniib lahaayen, ka dib markii ay 55 ruux ku dhinteen isbuurasho ka dhacday xaflad diimeed.
Dadkii mudaaharaadayay waxay sheegeen in isbuurashadu ay keentay dhib dadka kaga yimid laamaha ammaanka, laakiin dawladdu way diiday eedaymahaas.
Waaxda maalgashiga u qaabilsan Itoobiya ayaa sheegtay in ay wadahadal kula jirto warshadaha iyo beeralayda ubaxa ee ay saameeyeen daganansho la'aanta si looga caawiyo in ay ganacsigoodii dib u bilaabaan.
Dawladdu waxay ka baaraan dagaysa in ay magdhaw siiso, canshuurta sanad k dayso si gacan qabto ganacsiyadan oo ay intooda badan lahaayeen ajaaniib.
Calaamadihii ka soo haray dhibaatadii loo gaystay warshadda ayaa wali ka muuqda banaanka warshadda.
TOOS Muxuu ra'iisal wasaare Rooble ka yiri xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya